Ihe ị ga-ahụ na Bergen | Akụkọ Njem
Ọ bụrụ na ị gaa ileta Norway, mgbe ahụ Bergen ga-adị na ndepụta gị n’ihi na ọ bụ obodo nke abụọ kacha buo ibu n’obodo ahụ na ihe a na-akpọ «Isi obodo nke fjords». Ya mere, site na Bergen ụgbọ mmiri ndị na-ahụ maka ịgagharị ọmarịcha ugwu ndị a nke ugwu ndị dị elu na mmiri mmiri na-ekpo ọkụ na-apụ.
Bergen dị n'ụsọ oké osimiri ọdịda anyanwụ nke mba ahụ, na ndagwurugwu mara mma nke ugwu asaa gbara gburugburu, na ọkara ọkara narị afọ ọ ga-eme puku afọ mbụ nke ịdị adị. N'agbanyeghị na ọ bụ obodo dị mkpa, ọ na-echekwa otu ụda ma ọ bụ ọnọdụ ikuku obodo ụfọdụ ma yabụ, ọ bụ njikọ ndị njem nleta mara mma.
2 Bergen njem
Obodo tọrọ ntọala na 1070 ya mere, ọ karịrị afọ 900. O nwere ndụ dị egwu dị ka ọdụ ụgbọ mmiri n'ihi na echeghị ya n'aka ndị ohi, ahụhụ ma ọ bụ ọkụ. Akpatre ọkụ nke na-ebibi ihe tara ahụhụ na 1916. Mgbe ahụ agha ndị German na mbuso agha mba jikọtara ọnụ.
Obi abụọ adịghị ya, n'agbanyeghị akụkọ ihe mere eme ya ma ọ bụ ikekwe n'ihi ya, Bergen bụ obodo mara mma. Na ochie obodo Ọ bụ n'akụkụ ebe ugwu, saịtị ebe ụlọ osisi ochie ndị a na-ahụkarị na narị afọ nke XNUMX bụ, katidral ya na ụka oge ochie ma ọ bụ ebe ochie siri ike. Mpaghara a maara dị ka Ngardshoyden Ọ bụkwa ewu ewu maka ya Centurylọ narị afọ nke XNUMX, ya mere, ọ bụ ihu ọma, obodo nke, n'ihi akụkọ ihe mere eme ya, jikọtara ụdị ụlọ dị iche iche.
Bergen ọ̀ bụ obodo oyi juru? Ọ bụghị nke ukwuu, ekele Osimiri Gulf na-adịkarị mma, ọ bụ ezie mmiri na-ezo nke ukwuu. Ka anyị kwuo ihu igwe ya yiri nke Scotland. Ọ dị mfe ịbata ebe a? N'ezie, enwere ike ịnweta ya n'ebe ọ bụla n'ụwa. Nwere ike iji ụgbọelu ma ọ bụ ụgbọ mmiri si Denmark bịa, dịka ọmụmaatụ, ma ọ bụ ụgbọ oloko si Oslo. Ọ bụrụ n’ịji ụgbọelu rute n’obodo ahụ, e nwere ọtụtụ ụzọ iji jikọta ọdụ ụgbọ elu na etiti.
Nwere ike ịhọrọ Busgbọ elu Ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ okporo ụzọ ọkụ, Bybannen, ma ọ bụ tagzi. Gbọ oloko ahụ bụ nhọrọ dị ọnụ ala, ọ na-ewe naanị nkeji iri anọ na ise maka ego NOK 45 maka okenye. Ọ bụrụ n’inweela Kaadị Bergen, kaadị mbelata njem nleta, ị nwere ike ịga ugbu a n’efu. Ọ bụrụ n’ịnwere Busgbọ elu Ọdụ ụgbọ elu ma ọ bụ Flybussem jiri otu kaadị i nwere ego 38%, na-akwụ ụgwọ NOK 20 n’ụgbọ. Busgbọ ala a nwere ọtụtụ nkwụsị na etiti.
Enwere ọtụtụ ihe ị ga-ahụ mana ịme njikọ ma ọ bụrụ na ọ bụ oge mbụ gị ịkwesighi ịhapụ Bryggen, Floibanen Funicular, Aquarium na Azụ Azụ. Bryggen bu ebe ihe nlebara anya nke uwa ma burukwa uzo akuko obodo.
Taa A gbanwere ụlọ na ụlọ Bryggen ka ọ bụrụ ebe obibi, ụlọ ọrụ ihe osise na ụlọ nri. Ebe ọ bụ na ntọala Bergen n'okporo ámá ndị a abụwo isi obodo azụmahịa n'ihi ya, ọ bụ ezigbo ije, jupụtara n'okporo ụzọ mara mma ebe ị nwere ike ịhụ ma zụta uwe, eserese, eserese, nka ma ọ bụ ọla. Ọzọkwa ebe a bụ Ebe e wusiri ike Bergenhus na Azụ Azụ, tinyekwara ọtụtụ ụlọ nri na ebe a na-ere nri.
N'oge okpomọkụ ọnwa obodo awade ọrụ ụgbọ ala mgbagharị kedu akụkụ nke Hanseatic Museum na Schotstuene gaa na Ebe Azụ Ahịa Norwegian. Muselọ ihe ngosi nka mbụ na-agwa anyị akụkọ banyere ndị ahịa na-arụ ọrụ na Bergen ruo narị afọ anọ. Maka ụjọ ọkụ, enweghị ikike ikpo ọkụ ma ọ bụ ọkụ nye ndị na-ere ahịa, yabụ enwere nnukwu ọnụ ụlọ nwere kichin ma ha na-ezukọ ebe a n'oge oyi.
Emechaa, ụlọ ihe ngosi nka nke metụtara ịkụ azụ na-agwa anyị banyere echiche ala dị n'akụkụ osimiri na oke osimiri. Ọ na-arụ ọrụ na ezigbo ụlọ nkwakọba ihe na ọdụ ụgbọ mmiri na akụkụ ochie nke Bergen ma jupụta na ozi gbasara ọrụ ịkụ azụ. Ugbu a, banyere ọnụ ụzọ ụlọ ngosi ihe mgbe ochie ndị a, otu tiketi ahu gunyere uzo nke ulo oru ihe omuma ato ma enwere ike ịzụta ya n'ịntanetị. Busgbọ ala a na-apụ na Office nke ndị njem nleta Bergen: nkwụsị mbụ bụ na Schotstuene, site na Stranskaien, Strandgaten, Torget na Floibanen na-atọ ọchị.
Site na Schotstuene gaa n'ihu na Norwegian Fisheries Museum wee laghachi na mmalite. Ọrụ a na-ahapụ ọkara ọkara ọ bụla ma bụrụ n'efu. N’agbata Mee na Septemba oge mbụ bụ elekere iri na ụtụtụ nke ụtụtụ ma nke ikpeazụ gafee elekere ise nke mgbede. N’ọnwa June, Julaị na Ọgọstụ oge mbụ bụ otu ihe, nke ikpeazụ dị na elekere isii nke uhuruchi.
Ọzọ yi na fun mma bụ Floibanen funicular nke na-agbago Ugwu Floyen. Site n’elu echiche dị oke mma dịka ọ dị mita 320. The funicular bụ ọmarịcha, na waggbọ ala ọdịnala nke rụrụ ọrụ otu narị afọ gara aga. Ebe mmalite bụ obi ogbe ndịda Bergen na elu ya dị naanị nkeji isii. Na echiche obodo, ugwu na fjord di ukwuu.
N'elu ụlọ e nwere obere ebe a na-eme achịcha nwere ụlọ nri na ụlọ ahịa ihe onyinye ka ị nwee ike ịnọdụ ala oge ọ bụla ma nwee ọ theụ. Ọ bụrụ na ị soro ụmụaka gaa, enwere obere ogige a na-akpọ Bosque de los Trolls na ọdọ mmiri maka ịkwọ ụgbọ epeepe. Na-ejegharị na nkeji iri gaa n'ikpere mmiri nke ọdọ ebe a nwekwara ụlọ nri ọzọ. N'oge ọkọchị ọ mara mma ma ọ bụrụ na ịchọrọ ịga ije n'ugwu ahụ enwere ọtụtụ ụzọ ụkwụ na-eduga gị n'akụkụ ndị ọzọ magburu onwe ha.
I nwedịrị ike ịga Ugwu Floyehn ruo Ugwu Ulriken. A na-akpọ ụzọ ahụ Vidden na ọ bụ otu n'ime njem ndị kachasị ewu ewu. N’ezie, ọ bụ awa ise iji fee ije. Ọ bụrụ n’inwere Kaadị Bergen, a na-enye ọmarịcha ọchị site n’ọnwa Ọktọba yana mbelata ego 50% dị n’agbata Mee na Septemba. Ọnụ ego ọ bụla maka okenye ọ bụla bụ NOK 100.
Ebe ọzọ a ma ama bụ Edvard Grieg Museum, na mpụga etiti. Nwoke a bụ onye a ma ama na-ede abụ na ụlọ ahụ ka dị ka ọ dị na 1907. Ọ bụrụ na ị gaa n'oge okpomọkụ, ị nwere ike iri nri ma nwee ọ enjoyụ. Egwuregwu ndị a na-ewu ewu nke ọma ma ọ bụrụ na i nwere mmasị ịzụrụ ha n'ịntanetị ngwa ngwa. Visitga leta ihe ngosi nka, ma banyere nkà ị nwere ike ịma ihe KODE. E nwekwara Bergen Cultural History Museum, Theta Museum, Hakon Hall, Rozenkrats Tower na Chọọchị Santa Maria, dị ka ebe jupụtara n'akụkọ ihe mere eme na ọdịbendị.
Ikpeazụ ma ọ dịghị ihe ọzọ, enwere Berlọ ihe ngosi nka ochie nke Bergen na nchịkọta nke Traditionallọ osisi 40, nke a na-ahụkarị na narị afọ nke iri na asatọ na nke iri na itoolu. Enwere ihe niile site na ebe a na-eme achịcha na ebe a na-akpụ isi gaa na dọkịta ezé ruo n'ụlọ ndị mmadụ. Na oge ọkọchị enwere ndị na-eme ihe nkiri na-emegharị ndụ kwa ụbọchị nke "ochie Bergen".
La Kaadị Bergen Ọ bụ kaadị ndị njem akwadoro ma ọ bụrụ na ị ga-anọ ụbọchị ole na ole ma chọọ ileta ma mata obodo ahụ. Enwere atọ nsụgharị:
Kaadị Bergen 24 awa: NOK 280/100
Kaadị Bergen 48 awa: NOK 360/130
Bergen ibu 72 awa: NOK 430/160
Ọnụahịa ndị a bụ maka ndị okenye na ụmụaka sitere na 3 ruo 15 afọ. Na njedebe, N’iburu oke oria ojoo anyị na-arịa, Norway na-akpachapụkwa anya: Onye obula rutere taa aghaghi iche iche, ma o bu ihe onwere. Transportgbọ njem ụlọ na-adị nkịtị ruo mgbe ọkwa ọzọ, njem obi ụtọ na-ada mbà ma zere njem ọha na eze ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa. Ee, oge jọgburu onwe ya maka njem nleta. Mkpịsị aka gafere ka ọ mee.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ Njem » Getaways Europe » Norway » Ihe ị ga-ahụ na Bergen